यी हुन् कलियुगका कुम्भकर्ण !! ६ महिनासम्म लगातार सुत्ने सुन्दर युवती, यस्तो थियो कारण
एजेन्सी । सामान्य मानिस कति घण्टा सुत्ला ? ६ घण्टा,८ घण्टा,१० घण्टा कि १५ घण्टा ? तर एउटा अनौठो घटना ब्रिटेनमा घटेको छ। एक युवती घण्टा होइन दिन होइन महिनौ सम्म सुत्ने गर्छिन । र भन्छन कलियुगका कुम्भकर्ण । पुराणमा पढेका छौ जहाँ कुम्भकर्ण एकपटक सुतेपछि ६ महिनापछि मात्रै उठ्थे ।
एक समय डाक्टरसँग मिल्नका लागि उनले आफ्नो घर छोडेकी थिइन् । बेथलाई व्हिल चियरको आवश्यकता पर्छ । उनी कुरा गर्दा पनि निकै थाकेको महसुस गर्छिन् ।
बेथकी आमाका अनुसार उनी कुनै समय उठ्न सक्ने र उभिन पनि नसक्ने हुनेछिन् । उनी आफ्नो कुनै पनि साथीसँग मिल्न चाहादिनन् । बेथकी आमालाई उनको भविष्य सम्झेर निकै पिडा हुने समेत बताएकी छिन् ।